Su'aalaha la Weydiiyo - Shanghai Chunye Instrument Technology Co., Ltd.
Waa maxay tirada amarka yar?
MOQ: guud ahaan 1 unug / gabal / go'an
Qaababkee lacag bixinta loo taageeraa?
Habka lacag bixinta: By T / T, L / C, iwm
Shuruudaha Bixinta: Guud ahaan, Waxaan aqbalnaa 100% T / T kahor, isku dheelitirka kahor rarka.
Maxay yihiin hababka gaarsiinta ee la heli karo?
Goobtayada dekedda: Shanghai
U gaarsiinta: Worldwide
Qaabka gaarsiinta: badda, hawada, gawaarida, xawaaraha, isku darka gaadiidka
Muddo intee le'eg ayay tahay taariikhda alaabta la keenayo ay tahay?
Taariikhda bixinta waxay ku kala duwan tahay nooca wax soo saarka, tirada dalabka, shuruudaha gaarka ah iwm. Badanaa taariikhda keenista mashiinkeena weyn qiyaastii waa 15 ~ 30 maalmood; qalabka baaritaanka ama taariikhda keenista falanqeeyaha waa qiyaastii 3 ~ 7 maalmood. Wax soo saarka qaarkood waxay leeyihiin kayd, nala soo xiriir wakhti kasta si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Muddo intee le'eg ayaa ah muddada dammaanadda?
Waxaan u amreynaa warshadda lagu keenay qeexitaan lagu heshiiyey oo ka dhan ah cilladaha ku jira maaddada iyo farsamaynta iyadoo la adeegsanayo adeegsiga caadiga ah iyo adeegga muddo 1 sano ah ka dib bilowga nidaamka.
Sidee ayay tahay adeegyada farsamada ee alaabta?
Waa lagugu soo dhaweynayaa inaad nala soo xiriirto wakhti kasta haddii aad su'aal farsamo ka qabtid. Waxaan uga jawaabi doonaa si dhakhso leh oo waxaan uga jawaabi doonaa qanacsanaantaada. Haddii loo baahdo oo loo baahdo, Injineer diyaar u ah inuu adeeg siiyo oo taageero farsamo ka siiyo mashiinada dibedda.
Sensor-ka Electromagnetic, Quadrupole Shaxanka Samaynta Iskuduwaha Sawirka, Waxqabadka TDS Sensor, Dareeraha Dareemida Isukeenista Daawaha Titanium, Chlorophyll Sensor, Feeraha Dareeraha Fududeeyaha,